Yaadachiisa Jaal Marroof – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooYaadachiisa Jaal Marroof
Yaadachiisa Jaal Marroof
Damee Boruu: Adoolessa 16/2020
1.Gaafa koree tekinikaan hidhannaa hiikachuu didan: Jaal Goolicha Deengee fi Jaal Marroo Dirribaa Galatooma: mata duree jedhu jalatti barruu Damee Boruu jedhuun isin faarsee, isin eebisee, isin galatoofadheen jira. Guyyaa sana waan uummata keenya mudachuuf deemu waanan hubadheef jecha ejjennaan keessan abdii fi wabii bilisummaa Uummata Oromoo jedhee itti amanee ittiin bule jira. Sana booda karaa danda’e maraan: yaadaan, horiin, siyaasaa fi propagandaan isin wajjin dhaabachaan jira.
2.Gaafa aggamiin Xiyyaaran jaal Marroo ajjeessuuf yaalame: Jaal Marroon kunuusifamuu qaba : mata duree jedhu barruu Damee Boruun barressame jalatti:muxxannoon qabuu fi gorsa natti fakkaatu dhiyeesseen ture: Maxxansaa sana keessa yaada gorsa fakkatu kutee kunoo asii gaditti ilaala:
“Ajajaan waraanaa warri midiyyaa irratti ifa bahanii saaxilman uufata isaanii, rifeensa isaanii waan fakkaatan mara jijjirachuu qabu. Bakka oolanii fi bulan namoota isaan eeganiif warra isaan wajjin sadarkaa olii jiran qofti beekutu karaa dha. Diina of burjaajeessun qabsoo keessatti baayyee barbaachisaa dha. Kana booda jaal Marroon Midiyyaatti baahee odeessuun barbaachisaa miti. Firaa fi diina jalaa daachuu qaba. Qabsooo Bilisummaa Oromoo keessatti Qaroon ilmaan Oromoo hedduun tasa wareegamuun akka qabsoon lafa irra harkisamu godhee jira.
Nama isaaf dubbatu kadhimachuu qaba. Wal quunnamtii karaa afaaniin namoota isa bira jiran wajjin dubbachuu malee mootummaan Habshaa sagalee isaa adda baaftee akka beektu hubatamuu qaba. Mootummaas yoo tahe nama isaaf dubbatuuf qaba. Namni mootummaa irra jiru yaroo deemu maaliif konkolaataa kudhan wal fakkaatuun deema? Akka isa kam keessa jiruaachuun isaa hin beekamneef.
Fakkeenyaaf warri akka Joseph Kony hooganaa Ugandan Lords Army fi kan akka Abubakar Sheku hooganaan Boku Harma salpaatti dhabamuu hafaniif baayyee of hin saaxilan. Eessa akka jiranii fi eenyummaa isaanii namni hin beeku
Gootummaan qofti wareegama salphaa nama hin oolshu. Qaroominaa fi eegannaa guddaatu wareegama tasaa jalaa nama olcha. Gootni keenya goorsa jaallewwan isaaniis dhageefachaa ofiis itti yaadaa akka qabsoo bilisummaa uummata isaanii galmaan gahuuf akka nuuf jiraatan gargaarsa goonuuf irratti kadhanaan keenyaan galagalaa fi ganama isaan wajjin dhaabbachuu qabna.”dhuma maxxansaa sana.
3. (The quality of leadership is delegating responsibilities). Jabbinni Hoogganaa itti gaafatama hirmaachisuu danda’u dha. Warri waan hundaa nattu hojjeta jedhan dhabbinsa guddaa akka qaban mirkaneessa. Kononeel Abiyi ilaala waan hunda isatu beeka. Waan hundaaf isatu mataa dha. Yoo biyya deemee fotoo ka’uu dhabe: karaa haraa, muka dhaabaa, boqolloo keessa deemaa, qamadii keessaa deemaa, konkolaataa keessa bahee mushuraa wajjin fotoo ka’a. Kun dhukkuba isa fayyuu hin dandeenye. Jaal Marroo ati loltuu bilisumma humna riphee lola nama gaggeessu taatee qilleensa keessa maal hojjeta? Diinni lolamu qabu lafa jira. Lafa irraa Uummata Oromoo dugugee isaa balleessa jiru aggarra.Taayee Danda’aa wagga shantama lolanii mandara tokko bilisa baasanii of harkaa hin qaban nuun jechaa jira. Jiraachuu keef mirkaneessuuf qileessa keessa ooluu hin qabdu. Dhokkatee boola keessa yoo lubbuun jiraate Uummata Oromoof wabii fi abdii guddaa dha. Waan ati jirtuuf Kononeel Abiyi yoo Wallaga dhaqe na ajjeesu jedhee kan himate. Utuu ati jirtu nafxanyoonni akka barbaadan ilmaan Oromoo qalanii fixuu ni sodaatu. Loluu illee dhiisii lubbuu dheeradhu. Maaloo, maaloo oduu dabarsuu, gaaffii fi deebii kennuu irraa dhaabu. Yoo barbaachisaa tahe nama bakka kee bu’ee dubbatu (spokesman or spokeswomen) godhadhu.
(The most essential elements of guerilla warfare are security and discipline). Riphee lolaaf baayye barbaachisaa kan tahe naamusaa fi nagaa eegannaa dha. Haacaaluun Goota dhugaaf dhaabbatuu. Nafxanyaan diina, Minilki haree yaabatee dhufe, Abiyi nafxanyaa wajjin jira jedhee dhugaa dubbatee du’uu isaa irra utuu lubbuun jiraatee uummata isaaf harka millioona dhiba caalaa bu’aa qaba. Haacaaluun ni du’e gaafan dhaga’u ofiin walaale. Dhugaa miti jedheen dide. Sirba giddii utuu garaan koo gubatuu fudhadhe. Tsion Girma VOA Afaan Amhaaraa irratti Jaal Marroo eessa jirtaa? yaroo jettee gaafatu akkuma du’a Haacaluu gaddaanan guutame. VOAn Afaan Amhaara diina Uummata Oromoo keessa warra toora duraa irra jiran tahee utuu jiru Jaal Marroon gaaffii fi deebii kana irraa maal argachuu barbdaada? Gargarsa dingadee, siyaasaa, diploomasii yookaas fira nafxanyootaa horachuu? Waan tokko keessaa argachuu hin danda’u. Duwwaa. Haacaluun uttu gaafa sana isa akka ajjeessan beeke hin dubbtu taha. Diina ofii tufachuun eessaa dhufee? Yaroo hundaa diina tufatanitu nama balleesa. Oromoof gootni hin guddatu. Nutu akka hin taanetti herega(miscalculation and undermining the enemy). Kun jabina utuu hin taane dhadhabbii keenya akka tahe hubachuu qabna.
Hiriyaan koo tokko” gamni nama irraa barata, gowwaan of irraa iyyuu hin baratu” jedha.
Fakkennya lama: i) Jaal Laggasaa Wagii utuu hin wareegamiin duraa radiyoo SBO irratti akka Jaal Marroo kana galgalaa fi ganama dubbata. Isa argee gorsuuf ayyaana hin qabuun ture. Akka gaagga’amuuf deemu nan arga. Inni garuu diinaaf bakka jiru oddefannoo akka kennaa jiru waan hubate natti hin fakkaatu. Yoo lafa bilisoome qabanne rakkoon hin jiru. Naannoo diinni tuhachaa jiru keessa waan tureef yaroo gabaaba keessatti itti marsanii wareegame. ii) Alemayoo Dhugumaa mucaa durbii koo waan taheef karaa firaa qunnamee waan gochuu qabu gorsaan ture. Nan hin dhageenye. Alemayyoon baayyee qara waan taheef nama dhaga’uun dadhabbii itti fakkaata. Waraana laga itti dhiisi Shagar deeme. Achumaan akka Nadhii Gammadaafaa bakka gahee hin beekamiin hafe.
Walii gala qabsoo bilisummaa wagga dheeraaf gochaa jiru kana keessatti hooggantoota qaroo hedduu tasa dhabnee jirra.Sirni nafxanyaa har’a ijaaramee qabsawwan fi sabboontota Oromoo itti duula guddaa gochaa jira. Gootota akka Haacaluu ajjeessuudhaan uummata keenya haamilee cabsuuf yaalaa jira. Yaroo dhiphuu akkanaa keessa qabsawwaan akka Jaal Goolichaa fi Jaal Marroo eegumsa guddaa qabaachuu qabu. Ammaaf wabii fi abdiin bilisummaa uummata isaanii gatiittii isaanii gubaa jira. Isaanis of eegaa fi uummata isaanii eeguuf dirqama qabu.
Ibsa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Jaal Marroo Dirribaatiin
Ibsa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Jaal Marroo Dirribaatiin Adooleessa 08 2020
#JAAL_MARROO IRRAA DHAAMSA ERGAME
#JAAL_MARROO IRRAA DHAAMSA ERGAME WAXABAJJII 22,2019 Dhaamsa oromummaa Jaal Marroo irraa Qeerroo bilisummaa Oromoo guuttumma oromiya…
Oromo Protests Continues – July 19, 2020
Uummani Oromoo kuma dhibbootan hidhamman hatattamaan akka gadidhiissaman